Maxay salka ku haysaa Colaadda Canfarta iyo Soomaalida? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, FBC
Cabdi Maxamuud Cumar madaxwaynihii hore ee deegaanka
Iyada oo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waarana laga gaarin sheegashada dhulka la isku hayo waxaa xaaladda sii huriyey guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiya oo soo saaray go'aan ah in 8 tuulo oo xadka labada deegaan ku teedsan iney doorasha ka dhaceyn shacabka degganna ay codkooda ka dhiibtaan tuulooyinka u dhow ee ay gaari karaa.
Go'aanka guddiga doorashooyinka oo ay si weyn uga biyo diideen maaulka dowlad deegaankaSoomaalida iyaga oo qoray warqad ay ku sheegeen iney marnaba aqbaleyn dhul uu deegaanka soomaalida leeyahay in deegaan kale la hoos geeyo.
Deegaanka cafrtana dhankoda waxay ku doodayaan in tuulooyinka 8-dda ah uu guddiga doorashooyinka go'aanka ka gaaray la hoos geeyo deeganka cafarta doorashada soo socotana ay uga dhacdo deegaankaasi.
Guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiyana go'aanka ay gaartay waxay u sababeysay inta xal waara laga gaaraya qaddiyadda tuulooyinka ay maamullada labada deegaan isku haystaan iney xal u aragto labada deegaanba iney halkaasi doorasha ka sameyn si looga gaashaanto isku dhac dambe oo yimaaddo.
Maxaa sababay isku shaandheynta wasiirrada dowlad deegaanka Soomaalida?
Xukumaddii deegaanka Soomaalida ka arrimineysay uu hoggaaminayey madaxweyne Cabdi Max'uud Cumar tuulooyinka Cadhuufo, Caddeeyto iyo Garbo-Ciise waxay siisay deegaanka cafarta iyada oo loo qoray warqad rasmi ah oo dhulkaasi deegaanka cafrat lagu hoos geynayo.